बिग्रिएको नोट जतनसँग राख्नुहोस्, सजिलै साट्न सकिन्छ - Arthapage
बिग्रिएको नोट जतनसँग राख्नुहोस्, सजिलै साट्न सकिन्छ
प्रकाशित मितिः ३० पुष २०७५, सोमबार ०७:५६ January 14, 2019
कुनै पनि मुलुकको नोट सम्पत्ती हो । त्यसैले नोट बिग्रेमा वा खोटो मुद्रा भएमा केन्द्रीय बैंकले नोट साटिदिने व्यवस्था गरेको हुन्छ । नेपालमा पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले बिग्रेका नोटहरुको सटही गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
कस्तो नोटको सटही हुन्छ ?
राष्ट्र बैंकले झुत्रो मुद्रालाई खिच्ने, नष्ट गर्ने वा अन्य बैंक नोट वा सिक्कासँग सटही गरिदिन्छ । आगोले पोलिई, किराले खाई, च्यातिई, पानीले भिजी वा अन्य कूनै किसिमले चलनचल्ती योग्य नभएमा त्यस्तो नोट सटही गर्न पाइने व्यवस्था छ ।
राष्ट्र बैंकले डिजाइन मेटिएको, च्यातिएको, विकृत वा पचास प्रतिशतभन्दा बढी भाग नभएको बैंक नोट वा सिक्का सटही नगर्न सक्छ । नोट टुक्रा टुक्रा भई दुई वा सो भन्दा बढी भागमा बिभाजित भए तापनि एउटै नोटका टुक्राहरू हुन् भनी यकिन हुन सक्ने गरी दावी पेश गर्न सक्यो भने त्यस्तो नोटको सटही हुन्छ ।
नोट सटहीको दाबी कसरी गर्ने ?
बिग्रेको नोट भएको व्यक्तिले त्यस्तो नोट सट्टा भर्नाको दाबीका लागि तोकिएको ढाँचामा निवेदन लेखेर सट्टा भर्ना दिने अधिकारीसमक्ष दरखास्त दिनुपर्दछ । एकसय रुपैया¬ दरसम्मका नोटहरूका लागि अधिकृत तृतीय श्रेणी र एकसय रुपैयाँ भन्दा माथिका जुनसुकै दरका नोटहरूको लागि अधिकृत द्वितीय श्रेणीसमक्ष दरखास्त दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
यसरी सोधभर्नाको लागि दाबी गरी बुझाइएको नोटको अंक मेटिएको वा नमेटिएको, अस्पष्ट भएको वा नभएको, नोट च्यातिएको वा नच्यातिएको, बिकृत भएको वा नभएको, बेजोडा भएको वा नभएको, नोटमा सच्याएको वा नसच्याएको, मनोमानी लेखेको वा नलेखेको लगायतको जाँचबुझ उक्त अधिकारीले गर्छ । सटही हुने नोट भएमा दरखास्त बुझाएको १२० दिनभित्रमा सट्टा भर्ना रकम पाइन्छ । तोकिएको मितिभित्र नगएमा उक्त रकम नपाइने व्यवस्था समेत रहेको छ ।
बैंक नोट वा सिक्काको धनीलाई तोकिए बमोजिम क्षतिपूर्ति दिई वा नदिई त्यस्ता बैंक नोट वा सिक्का खिच्न वा नष्ट गर्न सक्नेछ । बैंकले कुनै मुआब्जा नदिई बाहिरी स्वरुप परिवर्तन गरिएको वा खोटो सिक्का वा नक्कली नोट जफत गर्न सक्नेछ । त्यस्तै, हराएको वा चोरिएको बैंक नोट वा सिक्काको धनीलाई बैंकबाट सट्टा भर्ना पाउने हक हुने छैन ।
प्रकाशित मितिः ३० पुष २०७५, सोमबार ०७:५६ |
Prevस्टेशनरी व्यवसायी महासंघको अध्यक्षमा नवनिधी पन्त निर्वाचित, बाँकेबाट पौडेल र अधिकारी
Nextयुट्युव हेरेर ५ हजार कुखुरापालन गर्ने १९ वर्षिय चलाउनेको आँट